तेस्रो विश्वयुद्धको त्रासः आणविक हतियार कसको आदेशमा कसरी लन्च हुन्छ ? आणविक हतियारमा रुस नै विश्वको शक्तिशाली देश
जनतापाटी बिहीबार, फागुन १९, २०७८ मा प्रकाशित
मस्को । रुसले तेस्रो विश्वयुद्ध भएमा आणविक हतियारको व्यापक प्रयोग हुने बताएको छ । रुसका विदेशमन्त्री सेर्गी लेभरोभले बुधबार तेस्रो विश्व युद्ध विश्वका लागि अत्यन्तै विनाशकारी सावित हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
रुसले गत हप्तादेखि युक्रेनमा विशेष सैन्य अपरेसन जारी गरेको छ । तर, यदि किभले आणविक हतियार प्राप्त गरेमा भने विश्वका लागि ‘वास्तवमै ठूलो खतरा’ उत्पन्न हुने उनको चेतावनी छ । युरोपसहित पश्चिमा राष्ट्रले युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराइरहेका बेला रुसको कडा चेतावनी आएको हो ।
तेस्रो विश्वयुद्ध हुने आशंका बढिरहेको बेला आणविक हतियारका सम्बन्धमा जनमानसमा कुन देश कति शक्तिशाली र कसरी त्यो हतियार प्रयोग हुन्छ भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।
स्कटहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इस्टिच्युटका अनुसार आणविक हतियारमा रुस नै विश्वको शक्तिशाली देश हो । दोस्रोमा अमेरिका रहेको छ । यस्तै, चीन, फ्रान्स, पाकिस्तान, भारत र इजरायल क्रमश: तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैँटौँ र सातौँ शक्तिशाली देश हुन् । इस्न्टिच्युटका अनुसार रुससँग ६ हजार २५५ वटा आणविक हतियार रहेको छ ।
आणविक हतियार प्रयोग गर्न कुनै पनि देशमा एउटा टिम रहेको हुन्छ । जसले राष्ट्रप्रमुखको आदेशअनुसार काम गर्दछ ।
कुन देशमा कसको आदेशपछि आणविक हतियार प्रयोग हुन्छ ?
अमेरिका - परमाणु फुटबल
ब्रुस ब्लाउ पूर्व अमेरिकी मिसाइल प्रक्षेपण अधिकारी हुन्। तर, उनी अहिले यो संसारमा छैनन्। ७० दशकमा उनले अमेरिकाको गुप्तचर आणविक मिसाइल बेसमा काम गरेका थिए।
ब्रुस ब्लाउ भन्थे, ‘हामीलाई मिनेटमेन भनिन्थ्यो। यो किनभने यदि आदेश दिइयो भने हामी एक मिनेटभित्र परमाणु मिसाइल प्रक्षेपण गर्न सक्थेउ।’
ब्रुस र उनका साथीहरूले कम्प्युटर मोनिटरलाई सधैं निगरानी गर्थे, जसमा मिसाइल प्रक्षेपण गर्ने आदेश जुनसुकै बेला आउन सक्थो। उनी भन्थे, ‘अमेरिकी प्रणालीमा परमाणु हतियारको प्रयोगको आदेश एक व्यक्तिले मात्र दिन सक्छ र त्यो देशको राष्ट्रपति हो।’
‘त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग सँधै निश्चित व्यक्तिहरू हुन्छन्। उनीसँग न्यूक्लियर फुटबल भनिने एउटा ब्रीफकेस हुन्छ ।’ब्रुस भन्छन् ।
यो कालो रंगको छालाको ब्रीफकेस हेर्दा धेरै सरल हुन्छ । तर यसमा विशेष उपकरणहरू हुन्छन्, जसको माध्यमबाट राष्ट्रपतिले आफ्ना वरिष्ठ सल्लाहकारहरू र अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग जुनसुकै बेला कुरा गर्न सक्छन्।
ब्रुस भन्छन्, ‘यस ब्रीफकेसमा कार्टुन पुस्तक जस्तै पृष्ठ पनि हुन्छ, जसमा युद्ध योजना, आणविक क्षेप्यास्त्र र तिनका लक्ष्यहरू ग्राफिक्सको माध्यमबाट विवरण दिइएको हुन्छ। आक्रमण भयो भने कति मानिस मारिनेछन् भन्ने पनि विवरण दिइएको हुन्छ।’
अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको महासंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि एक अनुमान अनुसार सन् २०२२ को शुरुवातसम्म विश्वका ९ देशमा १२,७०० आणविक क्षेप्यास्त्र छन् । यीमध्ये धेरैजसो रुससँग छन् र अमेरिका यस मामिलामा दोस्रो नम्बरमा छ । यसमा पाँच हजारभन्दा बढी यस्ता मिसाइल छन् ।
अमेरिकामा मिसाइल प्रक्षेपण गर्ने प्रक्रिया पेन्टागन वार रुमबाट सुरु हुन्छ तर यसका लागि वार रुमलाई राष्ट्रपतिको आदेश चाहिन्छ । तर, राष्ट्रपतिले मिसाइल प्रक्षेपण अधिकृतलाई आफ्नो विशेष परिचय दिँदा पनि राष्ट्रपतिको आदेश मानिन्छ र यो परिचय बिस्कुट जस्तो प्लास्टिकको कार्डमा हुन्छ।
राष्ट्रपतिले यो कार्ड सधैं आफूसँग राखेका हुन्छन्। यो त्यही कार्ड हो जसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनिन्छ । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति पाएपछि केही मिनेटमै परमाणु मिसाइल प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ।
ब्रुसले भने, ‘राष्ट्रपतिको आदेश प्राप्त गरेपछि मिनेटम्यान अर्थात् जमिनमा तैनाथ गरिएका मिसाइलहरू, वा पनडुब्बीमा तैनाथ गरिएका मिसाइलहरूलाई प्रक्षेपण कोडको साथ खोलिन्छ र आक्रमणको लागि तयार हुन्छ।’ ब्रुसका अनुसार प्रक्षेपण गर्न आणविक क्षेप्यास्त्र कुनै पनि समयमा दुई जना व्यक्ति चाहिन्छ, जसले आ-आफ्नो कोड बताउँछन्।
उनले भने, ‘मेरो सम्पूर्ण करियरमा एक समय थियो, जब यस्तो लाग्थ्यो कि परमाणु युद्ध हुन्छ। तब म जवान थिएँ र मलाई संसारमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा थिएन। एकपटक परमाणु युद्धको लागि तयार हुन चेतावनी प्राप्त भयो।’
ब्रुस र उनका सहकर्मी टिमोथी मिसाइलको प्रक्षेपण कोड अर्थात् चाबी लिएर कुर्सीमा बसेका थिए। उनी मिसाइल प्रक्षेपणको अन्तिम आदेशको पर्खाइमा थिए, तर त्यो कहिल्यै नआउनु नै राहतको कुरा हो ।
यो सन् १९७३ को कुरा हो जब अरब र इजरायल युद्धको मैदानमा आमनेसामने भएका थिए । आणविक हतियारको प्रयोग हुन नदिँनु नै राहतको कुरा हो । पहिले सन् १९६० को दशकमा क्युवाली मिसाइल संकटका बेला अमेरिका र सोभियत संघ आणविक युद्धको निकै नजिक पुगेका थिए ।
तर, के अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुनै धम्की वा उत्तेजना बिना आफ्नो तर्फबाट आणविक मिसाइल प्रक्षेपण गर्न आदेश दिन सक्छन् ।
ब्रुसले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संयुक्त चिफ अफ स्टाफ कमिटीका प्रमुखले यो आदेश पालना गर्न अस्वीकार गर्न सक्छन्। तर, राष्ट्रपतिको मातहतमा काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आदेश पालना गर्ने तालिम दिइएको हुनाले यस्तो हुने सम्भावना कम छ। त्यसोभए यदि राष्ट्रपतिले आफ्नो तर्फबाट परमाणु मिसाइल प्रक्षेपणको आदेश दिन्छ भने मलाई विश्वास गर्नुहोस् कि यसलाई रोक्न धेरै गाह्रो छ।’
रूस - परमाणु ब्रीफकेस
इगोर सेजेन हतियार विशेषज्ञ हुन्। उनी रुसका बासिन्दा हुन् र कुनै समय त्यहाँको सरकारमा काम गर्थे ।
सन् १९९९ मा रुसले उनलाई लण्डनको एउटा कम्पनीलाई मिलिटरी इन्टेलिजेन्स दिएको आरोप लगाइएको थियो । इगोरले आफू निर्दोष भएको बताए पनि उनलाई ११ वर्षको लागि कैद गरियो। उनी २०१० मा जेलबाट रिहा भए, त्यसपछि उनले लन्डनमा बसोबास गर्ने निर्णय गरे। उनी अहिले बेलायती रक्षा थिंक ट्याङ्क रूसीका वरिष्ठ फेलो हुन्।
इगोर बताउँछन्, ‘अमेरिकामा आणविक फुटबल जस्तै रुसका राष्ट्रपतिसँग पनि आणविक क्षेप्यास्त्रको कोडसहितको एक आणविक ब्रीफकेस हुन्छ। यो ब्रीफकेस सधैं राष्ट्रपतिको वरिपरि हुन्छ। उनी सुत्दा पनि उनको १०-२० मिटरभित्र हुन्छ। रुस आक्रमण नजिकै छ, ब्रीफकेस अलार्म बज्छ र फ्ल्यासलाइटहरू जान्छ, राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै ब्रीफकेसमा पुग्न र प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई सम्पर्क गर्न अनुमति दिन्छ।’
त्यस्ता दुईवटा ब्रिफकेस रुसी प्रधानमन्त्री र रुसी रक्षामन्त्रीसँ पनि छन् तर राष्ट्रपतिले मात्र परमाणु आक्रमणको आदेश दिन सक्छन्।
इगोर बताउँछन्, ‘राष्ट्रपति सर्वोच्च कमाण्डर हुन्, यो ब्रीफकेस उनको जिम्मेवारी हो। आपतकालीन अवस्थामा उनले सेनाका कमाण्डरहरू र प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग यो ब्रीफकेसबाट कुरा गर्न सक्छन्, उनलाई कुनै टेलिफोन चाहिँदैन।’ यस्तो अवसर एक पटक मात्र आयो जब रूसका राष्ट्रपतिले यो ब्रीफकेस खोलेर सक्रिय गर्नुपर्‍यो।
इगोर बताउँछन्, ‘२५ जनवरी १९९५ मा यो ब्रीफकेसको अलार्म बज्यो। यसको बत्ती चम्कन थाल्यो। राष्ट्रपतिको डेस्कमा दोस्रो चेतावनी बत्ती बलेको थियो। त्यतिबेला बोरिस येल्तसिन राष्ट्रपति थिए।’ रुसी राडारले सीमा नजिकैको बेरेन्ट सागरमा मिसाइल देखेको थियो, जुन तीव्र गतिमा रुसतर्फ बढिरहेको थियो र समय छोटो थियो।
इगोर बताउँछन्, ‘बोरिस येल्तसिनले आफ्नो ब्रीफकेस सक्रिय गरे। उनले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग अब के गर्ने भनेर परामर्श गरिरहेका थिए र यसका लागि उनीसँग पाँचदेखि नौ मिनेट मात्रै थियो।’ अनि रुसी पनडुब्बीहरूलाई जवाफी हमला गर्न तयार रहन आदेश दिइयो।
यद्यपि, पछि यो चेतावनी अलार्म गलत अलार्म थियो भनेर पत्ता लाग्यो। यो वास्तवमा नर्वेबाट एक रकेट थियो, जुन एक वैज्ञानिक मिशनमा जारी गरिएको थियो। यस रकेटलाई रुसतर्फ आउँदै गरेको मिसाइल सम्झेर आक्रमणको अलार्म बजाइएको थियो ।
यदि बोरिस येल्तसिनले त्यसबेला आणविक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्ने आदेश दिएको भए युद्धको इतिहासमा धेरै नयाँ पाना थपिने थियो। इगोर भन्छन्, ‘रुसमा प्राय: मिसाइल प्रक्षेपणको तयारी कत्तिको ठोस छ भनी पत्ता लगाउन अभ्यास गरिन्छ। कहिलेकाहीं मिसाइल पर्यवेक्षकहरूलाई गलत प्रक्षेपण कोडहरू दिएर आक्रमणको लागि तयारी गर्न भनिन्छ। यो वास्तविक युद्धको स्थितिमा आणविक आक्रमण गर्न हिचकिचाउछन् कि भनेर जाँच गर्नको लागि गरिन्छ।’
अमेरिकाजस्तै रुसी प्रणालीमा पनि राष्ट्रपतिले आणविक आक्रमणको आदेश दिएमा आक्रमण हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गरिएको छ ।
चीन - गहिरो सुरुङहरू
टोङ जाओ बेइजिङस्थित कार्नेगी चिचानहुआ सेन्टर फर ग्लोबल पोलिसीका फेलो हुन्। उनी भन्छन् कि यो सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो जुन हामी मानिसहरूले सामना गरिरहेका छौं। आणविक हतियार र आणविक युद्ध प्रत्यक्ष रूपमा मानव अस्तित्वसंग सम्बन्धित छ।
उनी भन्छन्, ‘इतिहासमा धेरै अवसरहरू आए जब हामी आणविक युद्धको धेरै नजिक पुग्यौं र सम्पूर्ण मानव जाति खतरामा परेको थियो।’
चीन विश्वका ती देशहरूमध्ये एक हो जससँग परमाणु हतियारको शक्ति छ तर उसको नीति पहिले आक्रमण गर्ने छैन। टोङ जाओ विश्वास गर्छन् कि यसको पछाडि ठूलो कारण छ र त्यो हो कि चीनसँग पहिले नै सम्भावित परमाणु आक्रमण पत्ता लगाउन सक्ने क्षमता छैन।
उनी भन्छन्, ‘चीनले पर्खनेछ र पहिले आणविक हमला भएको छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्नेछ। पुष्टि भएपछि उसले अवस्थाको स्टक लिनेछ, आक्रमण कस्तो छ र कति ठूलो छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नेछ। त्यसपछि मात्र के हो भनेर विचार गर्नेछ। बदला लिने विकल्पहरू छन् ।’
तर, यदि चीनका सबै शीर्ष नेता र सैन्य कमाण्डरहरू आक्रमणमा मारिए वा शत्रुको आक्रमणमा चीनको आणविक क्षेप्यास्त्र नष्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चीनको के हुन्छ ?
टोङका अनुसार ‘चीनले आफ्ना नेता र आणविक क्षेप्यास्त्रको आक्रमणबाट जोगिनका लागि धेरै तयारी गरिसकेको छ। त्यसका लागि गहिरो सुरुङको सञ्जाल बनाएको छ। केही सुरुङहरू पहाडी क्षेत्रमा जमिनमुनि सयौं सुरुङहरू छन्। ती क्षेत्रहरू एक सय मिटरको गहिराइमा रहन्छ।’
यसको अर्थ जमिनमा युद्धको धुवाँ उठिरहेको बेला जमिनमुनिको गहिरो सुरुङमा उपस्थित नेताहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिइरहेका हुन्छन् । तर, चीनमा परमाणु हमलाको अन्तिम निर्णय कसको हातमा छ ?
टोङ जाओ बताउँछन्, ‘यी सबै गोप्य कुरा हुन्, तर चीनमा सेनाले के गर्ने भन्ने कुरा कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरोको स्थायी समितिले तय गर्छ भन्ने मानिसहरू विश्वास गर्छन्। अन्तिम निर्णय समिति वा राष्ट्रपतिको हुनेछ, वास्तवमा कसैलाई थाहा छैन।’
चीनको सन्दर्भमा अर्को एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। आफूमाथि परमाणु हमला गरेपछि केही हप्ता वा महिनौंसम्म मौन बस्ने र त्यसको प्रतिकार गर्ने हुनसक्ने विज्ञहरू विश्वास गर्छन्, किनभने चीनले सुरुदेखि नै पश्चिमाको आक्रमण गर्ने नीतिको विरोध गर्दै आएको छ ।
टोङ जाओ भन्छन्, ‘जब चीनले आणविक हतियारको शक्ति प्राप्त गर्‍यो, तब यसका नेता माओ त्से तुङले यस मामिलामा चीन जिम्मेवार राष्ट्र बन्ने निर्णय गरे। त्यसबेला हिरोसिमा-नागासाकीमा के भयो भन्ने कुरा यसका नेताहरूले राम्ररी बुझेका थिए।’
तर त्यो त्यतिबेला थियो । चीनको दृष्टिकोण अब परिवर्तन हुँदैछ। पश्चिमी देशको सोचले पनि त्यसलाई असर गरिरहेको छ । २०१५ मा चीनले भूमिमा आणविक र परम्परागत मिसाइलहरूमा काम गर्ने शाखालाई स्थायी रूपमा समावेश गर्‍यो र यसलाई पिपुल्स लिबरेशन आर्मी रकेट फोर्स नामकरण गर्‍यो। अन्य धेरै देशहरू जस्तै, यो पनि हाइपरसोनिक टेक्नोलोजीमा काम गरिरहेको छ र आणविक हतियारहरूको हतियार बढाउन प्रयास गरिरहेको छ।
टोङ जाओ भन्छन्, ‘केही विज्ञहरू चाहन्छन् कि अमेरिका वा रुसका राष्ट्रपतिहरू जस्तै चीनका राष्ट्रपतिलाई पनि परमाणु आक्रमणको आदेश दिने अधिकार हुनुपर्छ, ताकि उसले आक्रमणको सम्भावना देखेपछि पहिले नै आक्रमणको आदेश दिन सकोस्। यही कारणले गर्दा चीनले शक्तिशाली रडारहरू विकास गर्दैछ र लामो दूरीको मिसाइलहरू बनाइरहेको छ।’
विज्ञहरूका अनुसार आगामी केही वर्षमा चीनले आणविक आक्रमणका सम्बन्धमा पहिलो पटक प्रयोग नगर्ने नीति पनि परिवर्तन गर्न सक्छ ।
बेलायत - अन्तिम रिसोर्ट पत्र
प्रोफेसर पिटर हेनेसी पुस्तक ‘द साइलेन्ट डीप’का सह-लेखक हुन्। उनी भन्छन्, ‘ब्रिटिस आर्मीसँग ट्राइडेन्ट आणविक क्षेप्यास्त्रले सुसज्जित चारवटा उत्कृष्ट पनडुब्बीहरू छन्, जसमध्ये एउटा उत्तर एटलान्टिक महासागरमा सधैं तैनाथ हुन्छ, यसले केवल संकेत दिएर परमाणु आक्रमण गर्न सक्छ।’
उनी भन्छन्, ‘उत्तरी एट्लान्टिकको मौन गहिराइमा, कतै एक पनडुब्बी सधैं रहन्छ, जसको उपस्थिति कसैलाई थाहा छैन। कसैलाई थाहा पनि हुँदैन।’
प्रोफेसर पिटर भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले मात्र बेलायती प्रणालीमा आणविक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न आदेश दिन सक्छन्। उनको एक आदेशमा रोयल नेवीले भ्यानगार्ड क्लास पनडुब्बीबाट परमाणु आक्रमण गर्न सक्छ।’
यसका लागि बेलायती प्रधानमन्त्रीले नौसेनाका दुई अधिकारीलाई मिसाइल प्रक्षेपणको विशेष कोड बताउँछन्। ती दुवै अफिसरको पनि विशेष कोड छ, उनीहरूले पनि आफ्नो कोड बताउँछन्। यो कोड दिने प्रक्रिया लन्डन बाहिर स्थित बंकरमा गरिन्छ। यहाँबाट समुन्द्रमा राखिएको पनडुब्बीलाई आणविक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्ने आदेश जारी गरिन्छ।
प्रोफेसर पिटर हेनेसी बताउँछन्, ‘पनडुब्बीमा पनि, दुई अधिकारीहरूले यी सन्देशहरू ताररहित रूपमा प्राप्त गर्छन् र त्यसपछि तिनीहरूको सम्बन्धित कोडहरू मिलाएर मिसाइल प्रक्षेपणको लागि तयारी गर्छन्।’
परमाणु बम दुई प्रकारका हुन्छन्-
पहिलो विखंडन बम जसमा परमाणु विखंडन प्रयोग गरिन्छ। यसमा जब एक न्यूट्रोन एक परमाणुसंग ठोक्छ, यसले परमाणुलाई दुई टुक्रामा विभाजित गर्दछ। यस प्रक्रियामा ठूलो मात्रामा ऊर्जा र प्रकाश उत्पादन हुन्छ।
दोस्रो थर्मोन्यूक्लियर वा हाइड्रोजन बम जसमा परमाणु फ्यूजन प्रयोग गरिन्छ। यसमा, अत्यधिक उच्च तापक्रममा हाइड्रोजनका आइसोटोपहरू एकअर्कासँग मिलाएर हेलियम बन्छन् र यस प्रक्रियामा ऊर्जा र प्रकाश उत्पादन हुन्छ।
प्रोफेसर पिटर पनडुब्बीबाट मिसाइल परीक्षण फायर हेर्ने मौका पाएका थोरै मध्ये एक हुन्।
उनी भन्छन्, ‘कप्तानले केही सेतो धुवाँ देखाए र त्यसपछि ग्यासको गोला समुद्रमा छिट्टै दौडियो। केही सेकेन्डमै ठूलो ठूलो विस्फोट भयो। समुद्रको पानीमा ग्यासको ठूलो बादल देखा पर्‍यो। यो सबै धेरै ठूलो थियो। यो एक नाटकीय ढंगले भयो। यो समुद्रको गहिराइबाट राक्षस बाहिर निस्केको जस्तो थियो।’
आणविक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्नु भनेको शत्रुको विनाश हो, त्यसैले यो काम ठूलो जिम्मेवारीका साथ गरिन्छ। प्रोफेसर पिटर हेनेसी भन्छन्, ‘बेलायतमा जब कोही प्रधानमन्त्री बन्छन्, उसले आफ्नै हातले आणविक मिसाइल भएका चार पनडुब्बीलाई चिठी लेख्छ। यो पत्रलाई 'लेटर अफ लास्ट रिसोर्ट' भनिन्छ। यो पत्र पनडुब्बीको भल्टमा राखिएको हुन्छ। प्रोटोकल अनुसार बेलायत आक्रमणमा पूरै ध्वस्त भइसकेपछि मात्र पढ्नुपर्छ।’
लेटर अफ लास्ट रिसोर्टमा पनडुब्बीका कमाण्डरका लागि के आदेश लेखिएको हुन्छ, तर कसैलाई थाहा हुँदैन। बेलायतमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा यो पत्र नखोली, नपढाई नै नष्ट हुन्छ । र हरेक नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनडुब्बीको लागि कमाण्डरलाई नयाँ पत्र लेख्छन्। यो प्रवृत्ति बेलायतमा वर्षौंदेखि जारी छ।
यो लेख पढिरहँदा विश्वको कुनै न कुनै कुनामा मानिसहरु खास कम्प्युटरको स्क्रिनमा हेरिरहेका हुन सक्छन्, कोही बंकरमा आफ्नो नेताको आदेशको पर्खाइमा बसिरहेका हुन सक्छन्, कोही पनडुब्बीका कमाण्डर बसिरहेका हुन सक्छन् । बंकरमा तिनीहरूको नेताको आदेशको पर्खाइमा। काेही सोचिरहेको हुनुपर्छ कि त्यहाँ कहिल्यै अन्तिम रिसोर्टको पत्र पढ्ने मौका पाउँछ कि भनेर।
अमेरिका, रुस, बेलायत र चीनका यी उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि आणविक हमला गर्नको लागि यस्तो कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सिस्टम हुनुपर्छ, जसको सहयोगमा जहाँबाट जुनसुकै बेला आक्रमणको आदेश जारी गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि, विज्ञहरू भन्छन् कि कुनै पनि नेताले यस्तो आक्रमणको बारेमा सोच्दैनन्, किनभने उसलाई थाहा छ कि यसको अर्थ विनाश हुनेछ। हिरोसिमा, नागासाकीमा भएको परमाणु हमलापछि यो विश्व पटक-पटक आणविक युद्धको छेउमा पुगेपनि अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले परमाणु आक्रमणको बटन थिचेका छैनन् ।
तर, रुसी राष्ट्रपतिको आणविक हतियारलाई उच्च सतर्कतामा राख्ने आदेशले विश्वलाई फेरि एकपटक आणविक युद्धको उचाइमा पुर्याएको छ । यो थ्रेसहोल्डभन्दा बाहिर विनाश मात्र छ र आणविक बटन थिच्ने नेताको एउटा निर्णयले सारा संसारलाई बर्बाद गर्न सक्छ।
खेर गएको प्लास्टिकबाटै यसरी उत्पादन हुन्छ इन्धन ६ मिनेट पहिले
वास्तविक जीवनमा घृणाको पात्र बनेका यी पर्दाका भिलेन १६ मिनेट पहिले
माइडियाको नयाँ स्वास्थ्य केन्द्रित वाईफाई वासिङ मेसिन नेपालमा १९ मिनेट पहिले